Fomba 9 mora entina mandeha haingana kokoa (any am-piasana na amin'ny fotoana rehetra) - An-Tsaina
Fomba 9 mora entina mandeha haingana kokoa (any am-piasana na amin'ny fotoana rehetra)
Indraindray, ny fotoana toa misintona foana.
Angamba izany andro sarotra any am-piasana tsy hifarana fotsiny izany.
Angamba miandry ny handre indray momba ny resadresaka momba ny asa na vaovao misy hetsika iray izay heverina ho avy.
Indraindray, ianao fotsiny dia te hampandeha haingana kokoa ny fotoanao mba hahatratraranao ny toerana tokony alehanao!
Ahoana no hataonao handany haingana kokoa ny fotoana… miteny ara-tsaina?
famantarana fa misy tovovavy ao aminao
1. Atsaharo ny mijery ny famataran'ora ary manisa ny minitra.
Ny fomba mahomby indrindra handefasana fotoana haingana dia ny fampitsaharana ny fanaraha-maso tanteraka ny famantaranandro ary hifantoka amin'ny zavatra hafa tanteraka.
Mety hiditra amin'ny asanao tsy misy fanelingelenana izany, very amin'ny fialamboly mandritra ny fotoana kelikely, na mihodina eo amin'izay rehetra eo alohanao fotsiny.
Raha tsy manana zavatra hatao ianao dia mitadiava zavatra!
Anontanio ny olona (na ny lehibenao) raha misy zavatra hafa azonao atao na manampy anao.
Miasà amin'ny tetikasa hafa raha toa ka tsy misy zavatra ilaina eo alohanao.
Mamolavola fahaiza-manao vaovao na makà fialamboly izay hanome anao zavatra hifantohany ny fotoanao sy ny herinao.
Na inona na inona ilainy, ny zava-dehibe indrindra dia ny fampijanonana ny saina amin'ny famantaranandro. Arakaraky ny hijerena azy no hahalasa fa ho mitohy hatrany.
Manaova zavatra fotsiny - zavatra hafa ankoatry ny fandaniana ny fotoanao mijery ny famantaranandro!
2. Atokaro ho lasa sakana ny fotoanao.
Afaka misintona ny andro iray, afaka misintona ny adiny iray, na iray minitra aza dia mety hitohy hatrany.
Fa raha mamorona fehezam-potoana fohy hifantohana ianao dia afaka manampy amin'ny fanafainganana ny fandehan'ny vanim-potoana iray manontolo.
Zarao ho dimy na folo minitra ny fotoananao. Avy eo mandany sakana hafa na manasa tena feno amin'ilay asa an-tànana na miasa amin'ny hafainganam-pandeha milamina kokoa.
Rehefa mifantoka tanteraka amin'ny zavatra iray dia mirona haingana ny fotoana.
Saingy sarotra ny mitazona ny fifantohana mandritra ny fotoana maharitra, indrindra raha tsy mahaliana na sarotra ilay asa ataonao.
Fa amin'ny fanomezana ny tenanao sehatra eo anelanelany ahafahanao mamela ny fifantohanao hisisika kely, dia mamela ny fahaizanao mifantoka amin'ny 'recharge' vonona handeha indray.
Midoboka sy mivoaka amin'ny fanjakana mikoriana ianao amin'izay very amin'izao fotoana izao .
3. Tapaho ny adidinao.
Ny monotony ny asa izay tsy maintsy averintsika dia mety hahatsapa ho mavesatra.
Ny fananganana ny teboka teo aloha, ny fisarahana amin'ny fiaraha-mientana hafa dia afaka manolotra zavatra antenaina.
Ny fampihetseham-batana, ny fampihetseham-batana ary ny fivoahana any ivelany dia fomba tsara rehetra hanampiana hahita fanavaozana ny saina mandritra ny asa mafy ataonao.
Ny hetsika dia tsy mila lava na mafy.
Na dia ny fiasan'ny birao mandritra ny dimy minitra na rivotra madio aza dia afaka manampy anao hamelombelona anao amin'ny alàlan'ny fandehanan'ny rà, ny oxygen bebe kokoa ao amin'ny ati-doha, ary ny endorphins fohy.
Manampy manokana izany ho an'ireo olona manana asa na fomba fiaina mipetraka.
Izany fanta-daza fa ny tsy fahampian'ny hetsika dia mety handrehitra ny fahaketrahana sy ny fahalainana izay mahatonga azy io ho sarotra kokoa hiasa amin'ny lalanao mandritra ny fotoana miadana.
cheshire saka dia nilaza fa tezitra daholo isika eto
4. Mandroboka ao anaty boky tsara.
Oviana ianao no nipetraka niaraka tamin'ny boky tsara ary very ny teninao tamin'ny tenin'ny mpanoratra?
Ny kanton'ny efa nihena ny famakiana boky hatramin'ny nisian'ny fahitalavitra ary vao mainka miharatsy amin'ny vanim-potoana niomerika.
Ny fiheverana nomen'ny olona ny famakiana izao dia mizarazara bebe kokoa amin'ny streaming, fanoratana nomerika, zavakanto nomerika, ary horonan-tsary fidirana eo noho eo.
Ny fanariana ny elektronikao sy ny fanokanana ny fotoananao sy ny sainao amin'ny boky tsara dia manome tombony hafa ankoatry ny fandaniana fotoana haingana fotsiny…
… Ny famakiana dia manampy amin'ny fitadidy sy ny fifantohana, manampy anao mamoritra ireo faritra ao amin'ny atidohanao izay manamora ny fianarana sy ny fahazoana, manitatra ny voambolanao ary manome fanamaivanana amin'ny fihenjanana.
5. Mamolavola lisitra To Do ho an'ny fizotranao sy ny tanjonao.
Afaka mitohy ny fotoana rehefa tsy mahatsapa isika fa manao fandrosoana mitombina mankany amin'ireo tanjona napetratsika ho an'ny tenantsika.
Ny lisitry ny To Do na ny drafitra ankapobeny hamakivakiana ny asanao mandritra ny andro dia afaka manome anao fahafaham-po kely azo avy amin'ny fikajiana ny zava-bita tsy vita amin'ny lisitrao.
Ary tsy mandany ny fotoananao amin'ny fiezahana hamantatra izay hatao manaraka, dia afaka mitsambikina avy hatrany ianao amin'ny tanjonao manaraka ary manohy milahatra.
Ny drafitra fiasa mieritreritra dia manome rafitra izay afaka manampy anao hitety mora kokoa ny andronao ary hahafahanao manara-maso ny fandrosoanao.
Hanomboka hahatsapa ihany koa ianao hoe haharitra hafiriana ny hetsika atao rehefa manaraka ny làlana ianao, izay manampy amin'ny vinavinan'ny ho avy sy mitantana tsara ny fotoanao, ao anatin'izany ny fampiasana tsara ny fotoanao.
6. Mihainoa mozika, horonan-tsary na podcast rehefa miasa ianao.
Ny audio dia afaka manampy ny fotoana handalo haingana kokoa rehefa mirotsaka amin'ny asa tsy mila fiheverana na hery ara-tsaina be ianao.
Ny manadio sy ny raharaha aza tsy dia mankaleo rehefa miaraka amina mozika mavitrika sy mavitrika.
Mety koa ny mozika fitaovana manampy anao hifantoka sy hifantoka amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo fanelingelenana re any ivelany rehefa manao asa mifantoka bebe kokoa ianao, toy ny fianarana na enti-mody.
Ny boky audio sy podcast dia fomba tsara handaniana fotoana, hianarana, na hampialana voly anao rehefa mandeha na manao asa miverimberina sy tsy misy saina.
Ny fanelingelenana dia ahafahanao milentika ao anaty audio mandritra ny fotoana ivoahanao ary miditra amin'ny fikoriananao na inona na inona asa manoloana anao izay manamora ny asa sy mandeha haingana kokoa ny fotoana.
7. Alamino ireo adidy tsy ilaina izay efa nesorinao.
Betsaka ny adidy izay manasatra sy manorisory fotsiny amin'ny fiainantsika manokana sy matihanina.
Betsaka zavatra izay tsy tiantsika manokana fotsiny ny fotoana hanaovana na hatao .
Ny famonoana ireo adidy tsy ilaina ireo dia fomba tsara handaniana fotoana mandritra ny fandrosoanao amin'ny fiainanao.
Tsy dia maro ny olona amin'ny ankapobeny no maniry ny hanadio lalina ny tranony na hamerina hametraka izany taratasy rehetra izany izay diso toerana, fa tokony hatao amin'ny fomba hafa na amin'ny fomba hafa.
Alamino ireo adidy ireo! Midoboka ao anaty ary tadiavo ny fomba haingana sy mahomby handalovana azy ireo hahafahanao miroso amin'ny zavatra hafa.
Ny ampahany tsara indrindra amin'ny fanesorana ireo adidy tsy ilaina dia ny tsy fanananao fihenjanana fanampiny sy fitaintainana amin'ny filàna azy ireo mihantona eo ambonin'ny lohanao.
Azonao atao ny misento ny alahelo fa efa vita izy ireo ary miroso amin'ny zavatra mahaliana kokoa.
8. Mitadiava fahafinaretana na aiza na aiza hahitanao azy.
Mandeha ny fotoana rehefa miala voly ianao!
Teny taloha izay maneho ny fahatsapana fa mihetsika haingana kokoa ny fotoana rehefa mandray anjara amin'ny hetsika mahafinaritra isika.
Mazava ho azy, hetsika maro mila ataonao dia tsy voatery ho mahafinaritra.Saingy, raha afaka mahita fomba hamoronana fahafinaretana ho anao ianao amin'izao fotoana izao, dia hanampy amin'ny fanafainganana ny fandehan'ny fotoana izany.
Izany dia mety ho zavatra kely toa ny fifaninanana amin'ny tenanao hamita ny asa amin'ny fomba mahomby kokoa noho ny taloha.
Ny fiaraha-monina dia afaka manampy singa mahafinaritra amin'ny hetsika tsy vita.
Na dia tsy voatery ho fantatrao na tahaka ny olona manodidina anao aza ianao, ny ambaratongam-pifaneraserana am-panajana sy ny fifaneraserana dia afaka manampy ny minitra hikorontana haingana kely kokoa.
ahoana no hilazana amin'ny olona tianao
Fanampin'izay, tsy hevitra ratsy velively ny mampiroborobo ny fifandraisana tsara amin'ireo olona handanianao fotoana be dia be. Manampy ny zava-drehetra hihazakazaka amin'ny fomba malefaka kokoa izany.
9. Fanamby ny sainao amin'ny hetsika ara-tsaina.
Indraindray ianao dia tsy manana safidy hamaky boky fotsiny, hihaino mozika, hivoaka any ivelany, na hanao zavatra hafa ankoatry ny mipetraka / mijoro tsy mihetsika.
Betsaka ny asa mandreraka, na tena ilaina aza. Angamba mpiambina ao amin'ny fivarotana fivarotana ianao. Na angamba ianao mipetraka ao amin'ny booth toll mandritra ny andro.
Na dia tsy maintsy mihazona fifantohana aza ianao, ny ankamaroan'ny fotoana dia tsy manao na inona na inona mihitsy na asa azonao atao amin'ny autopilot.
Ka omeo zavatra hatao ny sainao. Makà teny lava antonony (toy ny hoe 'antonony') ary andramo ny tsipelina mihemotra (sarotra ny mahagaga).
Na milalao ao amin'ny lohanao ny lalao A ka Z izay ahitanao lohahevitra iray ho anao - toy ny anaran'ny zazalahy - ary mila mamaly valiny isaky ny litera amin'ny abidia ianao.
Na ampitomboina 23 amin'ny 42 (na isa hafa).
Na tanisao ny anaran'ny mpilalao taloha sy ankehitriny ao amin'ny ekipa fanatanjahan-tena tianao na ny sarimihetsika rehetra nisehoan'ny mpilalao sarimihetsika sasany.
Misy fomba tsy voafetra hitoerana amin'ny saina tsy misy dikany, na dia mamono dimy minitra etsy sy eroa fotsiny aza.
Vakio ireto mba handanianao ny fotoana:
Tokony hiala amin'ny asa halanao ve ianao?
Fomba aharetana: fampivelarana ny faharetana amin'ny tontolo tsy manam-paharetana
Maninona no zava-dehibe ny fiainana indray andro any amin'ny fotoana iray (+ Fomba hanaovana azy)
vince mcmahon voaroaka ianao gif
ajanony ny mila sahirana amin'ny fiarahana
kylie jenner tia 18 tapitrisa
famantarana izy miditra aminao fa matahotra
r marina mandresy antsika titre
ahoana ny fandefasana hafatra aorian'ny daty voalohany